Famantarana 16 Tena Ataonao Toy ny Lehilahy: Ahoana no Ahazoanao antoka ny fihetsem-ponao - Fifandraisana
Famantarana 16 Tena Ataonao Toy ny Lehilahy: Ahoana no Ahazoanao antoka ny fihetsem-ponao
Noho izany, misy lehilahy vaovao eo amin'ny fiainanao…
… Saingy tsy azonao antoka raha tena tianao izy, na manadala tena fotsiny ianao.
Angamba ny fahatsapanao dia namadika anao taloha.
Nisy fotoana ve ianao resy lahatra fa tia olona? Azonao antoka fa tena nisy izy tamin'ity indray mitoraka ity.
Ary avy eo, tampoka teo, niova ny fihetseham-ponao, na tsapanao fa tsy mbola tao aminy ianao tamin'ny voalohany…
… Ary hitanao fa tao anaty toe-javatra iray izay sarotra ny nialana.
Tsy tianao hitranga intsony izany.
Manahy ve ianao fa manirery fotsiny ianao, na ny fiheverana tianao fa tsy ilay lehilahy?
Mampiahiahy anao ve ny hevitra hoe manana lehilahy amin'ny fiainanao tianao?
Azonao antoka ve fa tianao izy amin'ny tena toetrany?
Mitsoka mafana sy mangatsiaka ve ianao?
Mahatsiaro ho toy ny lohan'ny loha ve ianao indray andro, ary avy eo tsy miraharaha ny manaraka?
Manjavozavo amin'ny fahatsapanao ve ianao , ary mitady mazava amin'ny fiainam-pitiavanao?
Ireo famantarana etsy ambany dia hanampy anao hamantatra raha, ao am-ponao lalina, ny fahatsapanao an'ity lehilahy ity na tsia.
1. Mahatsiaro ho voajanahary ny miaraka aminy.
Rehefa mandany fotoana miaraka aminy ianao, rahoviana mihombo ny fihenjanana ara-nofo , angamba ianao hahatsapa mihoatra ny somary misavoritaka eo anatrehany.
Fa raha bandy tianao dia tokony hahatsapa ho voajanahary koa ny miaraka aminy.
Tokony hiparitaka ny resaka, ary tsy tokony hitady lohahevitra hodinihina ianao na hiezaka hameno ny fahanginana tsy ampoizina.
Tokony hahatsapa ho afaka ny ho manodidina azy ianao ary hankafy ny fifandraisana izay mihoatra ny ara-batana.
Tsy tokony hahatsapa ho teritery na inona na inona momba ny fotoana laninao miaraka aminy.
2. Nanana resaka nifanaovana mihoatra ny ambonimbony ianao.
Raha tsy fantatrao ny anarany sy tsy noresahinao ny lasa, ny asanao, ny nofinao, na ny fianakavianao, dia ho sarotra ny mahafantatra hoe iza izy tena dia.
Fa raha hitanao fa efa nanomboka nifanokatra ny momba ny zavatra lalindalina kokoa ianareo roa ary tianao ny zavatra hitanao momba azy hatrizay, izany dia famantarana tsara fa ny fahatsapanao dia mety ho tena izy.
3. Mieritreritra azy foana ianao.
Raha miaraka amina olona fotsiny ianao satria tsy tianao ilay hevitra hoe irery na satria mankaleo ianao, dia rehefa manana orinasa hafa ianao, variana manao zavatra mahafinaritra, na manintona olona hafa, izy ' Mety ho ianao no farany eritreretinao.
Etsy ankilany, raha hitanao fa na izy aza mibahana ao an-tsainao rehefa mivoaka sy manodidina ary mifanerasera ianao, dia famantarana tsara izany fa tena tianao io lehilahy io.
Raha tena tianao izy dia hieritreritra azy ianao. Rehetra. Ny. Fotoana.
Ho variana ianao any am-piasana ary ho hitanao fa nanomboka nilaza taminao ny namanao noho ny nofinofy rehefa manandrana miresaka aminao izy ireo na mitantara tantara aminao.
Hiandry azy tsy tapaka ianao handefa SMS aminao indray, tianao ho izy no hampionona anao rehefa mahasosotra anao ianao, ary mieritreritra azy ianao ny maraina ary ny zavatra farany amin'ny alina.
Tsy ho lavitra ny eritreritrao mihitsy izy, na impiry na impiry ianao no mahita azy.
4. Miresaka azy ianao.
Rehefa miresaka amin'ny vadinao ianao dia entinao.
Mitantara tantara momba ilay zavatra mahatsikaiky nolazainy na nataony ianao.
Tsy afaka ny tsy hiteny afa-tsy azy ianao, ary nanomboka nahatsikaritra izy ireo.
d von mahazo ny latabatra
5. Tsy nitranga tao anatin'ny indray alina io.
Tsy nihaona tamin'ity lehilahy ity ianao tamin'ny herinandro lasa.
Raha efa niaraka tamin'ny daty vitsivitsy ianao ary nahafantatra azy nandritra ny fotoana kelikely ary mihombo tsikelikely ny zavatra, dia famantarana tsara izany fa mety hanjary fifandraisana salama izany.
Raha vao teo amin'ny fiainanao fotsiny izy dia mila manome fotoana hiroboroboana sy hitombo ny zavatra, ary omena fotoana ny fahatsapanao ho matotra.
6. Nialona ianao.
Na dia mankahala ny hiaiky an'izany aza ianao, dia lasa manana fialonana roa.
Raha tsy tianao izy dia tsy ho hitanao ny manonona na miresaka amin'ny vehivavy hafa, avelao ianao hialona azy.
Fa raha hitanao fa mailo be ianao isaky ny manodidina vehivavy hafa izy ary voatsindrona ny sofinao raha miresaka momba ny sakaizany na ny sakaizany vavy, dia famantarana tsara dia tsara tianao izany.
Tsy tokony havelantsika hanjakazaka amintsika mihitsy ny fialonana na hiala amin'ny tanana fa ny fahasarotan'ny fialonana etsy sy eroa dia voajanahary ihany.
7. Miezaka mafy ianao maka sary ny fiainanao tsy misy azy.
Tsy fantatrao ny fomba nitrangan'izany, fa sahirana ianao maka sary an-tsaina ny fiainana toa inona raha tsy tao izy.
Tsy tadidinao tsara hoe nanao ahoana izy rehefa tsy teo izy satria efa nizara fahatsiarovana mahafinaritra be dia be sahady ianao.
Nanjary ampahany lehibe tamin'ny fiainanao izy, ary raha tena tianao izy dia tianao ny hijanona ho toy izany.
8. Nanomboka naka sary ny ho avy miaraka ianareo.
Azonao an-tsaina ny ho avy zaraina amin'ity lehilahy ity.
Raha ny fantatrao momba azy hatreto dia heverinao fa manana tanjona kendrena fiainana roa ianareo, dia hanao ekipa tsara ianao ary afaka mamoaka ny tsara indrindra.
Hitanao fa manonofy momba ny toerana mety hipetrahanao ianao, na ny traikefa mety hiarahanareo.
Na, amin'ny ho avy tsy dia lavitra, dia mieritreritra zavatra mahafinaritra azonao atao miaraka ianao amin'ny Krismasy, na volana vitsivitsy izao.
Ho fantatrao ny fitiavanao azy amin'ny hafalianao amin'ny fanaovana drafitra miaraka aminy.
9. Afaka mahita ny famelezana anao ny namanao.
Ny namanao dia afaka milaza ny fitiavanao an'ity lehilahy ity, na dia mbola tsy azonao antoka aza ianao.
Hitan'izy ireo ny fomba fitondran-tenanao sy ny fomba firesahanao momba azy, ary fantatr'izy ireo fa tena lohanao tanteraka ianao.
10. Mahaliana anao mihoatra ny vatany fotsiny.
Ny firaisana ara-nofo, raha nahatratra izany ianao dia tsara. Saingy tsy maneno azy ianao na mandefa hafatra aminy fa mitovy ihany.
Tianao ny sainy, ary koa ny vatany.
Afaka mandany ora maro miresaka aminy ianao. Tianao ny maheno momba ny fandraisany izao tontolo izao ary liana marina amin'ny heviny amin'ny zavatra ianao.
Te handany fotoana miaraka aminy ianao, na dia tsy tafiditra ao anatin'io fotoana io aza ny fahazoana vatana.
11. Manao ezaka tokoa ianao.
Handeha an-tsehatra ianao hamonjy an'ity lehilahy ity, ary ity dia famantarana tsara tena tianao tokoa.
Manao ezaka tokoa ianao amin'ny akanjo ho an'ny daty. Nanolotra sosokevitra hafahafa sy feno sary an-tsaina ho anao roa ianao.
Mety nividy fanomezana kely noheverinao fa tiany izy, na angamba nataonao nisakafo hariva izy.
Te handeha am-pifaliana lavitra ianao hahita azy.
Mieritreritra izay tiany na ilainy ianao, ary mametraka azy ho lohalaharana.
Tsy hiaraka aminy fotsiny ianao satria any izy ary satria mora izany. Vonona ny hametraka ny fotoanao sy ny herinao tokoa ianao amin'ny fahitana azy ary mampitsiky azy.
12. Mety hitera-doza ianao.
Napetrakao tany ho azy ny tenanao. Nisokatra ianao, ary nilaza taminy zavatra akaiky momba anao. Navelanao hitandrina ny mpiambina anao.
Vonona ny handray ny loza mety haratra ianao raha midika izany fa mandany fotoana miaraka amin'ity lehilahy ity ianao ary manokatra ny mety ho an'ny ho avy miaraka.
Tsy hampiharihary ny fonao amin'ny ratram-po sy fanaintainana mety fotsiny ianao, raha tsy azonao antoka fa tianao be io lehilahy io.
13. Tsy mieritreritra ex taloha ianao.
Ny eritreritrao dia tsy mizotra mankany amin'ny tovolahy farany niaraka taminao.
Raha ny marina dia tsy dia mieritreritra momba azy ireo mihitsy ianao, sahirana be manonofy momba ny fitiavanao vaovao.
Tsy manao izany ianao mba hampialona ny tovolahy farany fotsiny. Tsy miraharaha izay eritreritr'ilay bandy hafa mihitsy ianao.
14. Nijanona nitady olon-kafa ianao.
Tany am-piandohan'ny fiarahana tamin'ity lehilahy ity dia mety nanohy nandefa hafatra tamin'ny olon-kafa tamin'ny fampiharana sy tranokala isan-karazany any ianao.
Mety niaraka niaraka tamin'ny olon-kafa niaraka tamin'izay aza ianao.
Saingy najanonao izao rehetra izao. Voalohany, tsy te hametraka loza amin'ny fanananao amin'ity lehilahy ity ianao. Faharoa, tsy mahatsapa fotsiny ianao fa mila mijery safidy hafa.
Fantatrao ny antony? Satria tianao izy ary mihoatra ny fanorotoroana kely - ianao tena toa azy.
15. Tianao ny tian'ireo namany.
Mety mbola aloha loatra ny fotoana hihaonana amin'ny fianakaviany, fa angamba nampahafantariny anao ny sasany amin'ireo namany akaiky azy indrindra.
Tena nanao ezaka ianao mba hifaneraserana amin'izy ireo ary ho sariaka ankoatry ny mahafinaritra eto ambonin'ny tany.
Ianao dia maniry ny hisaintsainan'ny namany momba anao satria fantatrao fa hahasoa ny fifandraisanao amin'ny ho avy io lehilahy io.
Ny zava-misy hoe miala amin'ny lalanao toy izao ianao dia famantarana tsara fa tianao ny olona iray mihoatra ny kely.
16. Tsy te-hilalao lalao ianao.
Indraindray, rehefa manomboka mahita olona isika dia milalao zavatra amin'ny fomba iray.
Mety hidika izany fa miteny ianao hoe be atao ianao rehefa tsy hoe hampanao azy ireo anao fotsiny, na miresaka olona hafa hampahasaro-piaro azy ireo.
Fa tsy manao an'io miaraka amin'ity lehilahy ity ianao. Mamaly avy hatrany ireo lahatsorany ianao, manome fotoana ho azy ianao, ary tsy manandrana mampahatsiaro azy ho tsy azo antoka na tsy matoky tena ianao amin'ny lafiny rehetra.
Mampiseho izany fa tena misy ny fahatsapanao azy ary maniry ny hitondra ny fifandraisanao amin'ny ambaratonga manaraka ianao.
Mbola tsy azonao antoka raha tianao io lehilahy io? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Famantarana 9 Mifanaraka amin'ny saina ianao amin'ny mpiara-miasa aminao
Torohevitra 20 hanaovana asa fifandraisana lavitra
Fifandraisana miverimberina: Famantarana 14 hijerena
ny fomba ho be fitiavana kokoa amin'ny vadiko
lohahevitra horesahina amin'ny namana noho ny lahatsoratra
mariky ny tenin-dehilahy
David dobrik sy natalie noel
rehefa misy bandy mijery anao